Aragtida Le Pen ee Midawga Yurub oo la dhaliilay - BBC News Somali
Image caption Doodan waxaa ka qaybgalay 11 murashax
Hogaamiyeha midigta fog ee Faransiiska, Marine Le Pen, ayaa musharaxiinta kale u tartamaya madaxtinimada dalku weerar dhan walba kaga qaadeen markii ay gorrodda isku dareen dooddii labaad ee TV-ga laga sii daayey.
Musharaxa siyaasaddiisu dhexdhexaadka tahay, Emmanuel Macron, ayaa yidhi rabitaanka Le Pen ee waddaniyad isku koobka ahi wuxuu ka dhigan yahay "dagaal dhaqaale".
Intaa waxa dheer oo iyaguna eedeeyey dadka aaminsan siyaasadaha midigta oo sheegay in aanay go'aan adag ka qaadan xubinnimada Faransiiska ee Midowga Yurub.
Hase ahaatee, Francois Fillon, ayaa isana sheegay in Faransiiska ay dani ugu jiro ka mid ahaanshaha Midowga Yurub marka ay timaado in lala xaajoodo Maraykanka iyo Shiinaha.
Le Pen, oo ah hogaamiyeha xisbiga National Front (NF) ayaa ballan qaaday in ay maamulka xuduudaha Faransiiska ku soo celin doonto gacanta dawladda lacagta Euro-dana ay meesha ka saari doonto, hadii taasi u suurto geli weydona ay qaban doonto afti dadka lagu weydiinayo in Midowga Yurub dalku ka sii mid ahaado iyo in kale.
Le Pen oo laga qaaday xasaanadda si loo dacweeyo
Iyadoo ka qayb galeysay dooddii labaad ee ay iskugu yimaadeen iyada iyo 10 musharax oo kale ayaa inta hadalku kululaaday waxay sheegtay in madaxweynenimadeedu daryeel u noqon doonto nolosha muwaadiniinta Faransiiska.
Wareega koobaad ee doorashada madaxtinimada Faransiiska waxa la qaban doonaa 23 Abriil. Hadiise musharaxa ugu codka bataa heli waayo 50% iyo in ka badan waxa wereega labaad oo dhici doona 7 Mey ku tartami doona labada qof ee codadka ugu badan ka hela wareegga koobaad.
Obama oo laga codsanayo inuu isu sharaxo madaxtinimada Faransiiska
Mucaaradka Faransiiska oo musharrax dooranaya